London (CNN Business) Ny famerenana lava maharitra dia ny ahiahy lehibe indrindra ho an'ny mpanatanteraka orinasa rehefa mieritreritra ny fahatongavan'ireo valanaretina coronavirus izy ireo. Nefa be dia be ny fitazomana azy ireo amin'ny alina. Ny mpanatanteraka izay asa tokony hamaritana loza dia ahiana ihany koa ... Hamaky bebe kokoa »
Ny sandam-pitondrana sy fitateram-bary avy any amin'ny firenena dia mitentina 76,5 lavitrisa dolara amerikanina tamin'ny taona 2019. Io vola dolara io dia maneho ny tombony 12,2% ho an'ny mpanao kiraro vokatra mandritra ny dimy taona manomboka ny taona 2015 raha mitentina 68,3000 tapitrisa dolara ny fandefasana ireo entana ireo. ... Hamaky bebe kokoa »
Mitatitra ny fitomboan'ny taona 2009 ny indostria fitaratra fitahirizan'i Shina
Ny indostria fitaratra misy ny kaonty any Shina dia nirakitra ny fampandrosoana maharitra tamin'ny taon-dasa nandritra ny ezaka fanamafisana ny fanavaozana ny lafiny famatsiana, araka ny filazan'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknolojia (MIIT). Tamin'ny taona 2019 dia nitentina 930 tapitrisa ny lanjan'ny lovia lovia, nahatratra 6,6 isan-taona ny vokatra azo avy amin'ny ... Hamaky bebe kokoa »
BEIJING, 7 Mey (Xinhua) - nivezivezy indray ny fanondranana entana any Shina tamin'ny volana aprily, ary manampy ny famantarana fa mihazona ny varotra ny firenena any anaty ny famokarana fanampiny COVID-19. Niakatra 8.2 isan-taona ny fanondranana entana firenena isan-taona ho 1,4 trillion ... Hamaky bebe kokoa »
Araka ny fivoriana mpanatanteraky ny filankevitry ny Fanjakana Shinoa tamin'ny 7 aprily 2020, manoloana ny fihanaky ny valan'aretina manerantany, dia nanapa-kevitra ny fihaonana, ny Ivotoerana faha-127 izay natao tao amin'ny Internet tamin'ny tapaky ny faran'ny volana jona hanasa ny fampisehoana an-tserasera ... Hamaky bebe kokoa »
Momba ny vera Borosilicate
INONA NY FAHOROA BOROSILIKE? Ny fitaratra Borosilicate dia karazana fitaratra izay misy ny boron trioxide izay manome fahafahana ny fanitaran-tena mafana. Midika izany fa tsy ho triatra ambanin'ny fiovan'ny hafanana be loatra toy ny fitaratra mahazatra. Ny fijanonany dia nahatonga azy ho ... Hamaky bebe kokoa »
Tsy nandany fotoana nitetika ny fanodinana fako i Chine
Rehefa nanao loham-baovao maromaro sy nitondra ny Internet tamin'ny tafio-drivotra niaraka tamin'ny tadio ary fahatsiarovan-tena, "mpamily fako", teny izay toa ny vavan'ny olona rehetra manerana an'i Shina, dia isan'ireo isan-taona fakan'ny trondro marobe mahazatra indrindra azon'ny fampahalalam-baovao tamin'ny taona 2019, araka ny ... Hamaky bebe kokoa »
I Chine dia nivoady ny hanohana ireo orinasam-barotra vahiny satria tratran'ny otrikaretina ny toekarena manerantany
BEIJING, 9 aprily (Xinhua) - Nanome toky nanohy ny fanampiana ny orinasam-barotra vahiny i Chine ary manamaivana ny fiantraikan'ny COVID-19 amin'ny sehatra raha nisy namely ny toekarena manerantany sy ny varotra iraisam-pirenena, ny minisitry ny varotra (MOC). Ny fanafarana sy fanondrana firenena ... Hamaky bebe kokoa »
Famakafakana fohifohy momba ny zava-misy ankehitriny sy ny fanantenana ny indostrian'ny fanodinam-bokatra fako any Sina
Raha manana "mine" ny tanànantsika, ny fitaratra fako no mineraly ilaina indrindra ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Ny fitaratra fako dia iray amin'ireo singa sarotra indrindra hiatrehana ny fako an-tanandehibe. Lafo ihany koa izy ireo ary afaka mandoro ary tsy b ... Hamaky bebe kokoa »
Torohevitra toro-hevitra momba ny virosy Shinoa manohitra ny COVID19
Tao anatin'ny roa volana lasa izay tany Shina, dia manaraka ireto torohevitra ireto izahay mba hihoarana. Ankehitriny dia manantena izahay fa mety hanampy ireo mila izany torohevitra izany. 1.Tsy manary ny virus. 2.Ny akanjo dia manaova saron-tava fiarovana. 3.Ny soritr'aretina rehetra dia mandehana amin'ny dokotera aloha. 4.Tsy miangona, mijanona ao an-trano. 5.Raha mibontsina dia manarona ny vavanao a ... Hamaky bebe kokoa »
2002. Izy io dia mitady boaty famarotana sakafo miaraka amin'ny sakafo tsara kalitao ary amin'ny vidiny mirary, saingy indrisy fa tsy nahita izahay. Ary hitanay ihany koa fa maro ny orinasa toa anay amin'izao fotoana izao ao anatin'ity fahasamihafana ity. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanampy ny orinasa tahaka izany izahay hamaha izany olana sy kintana izany ... Hamaky bebe kokoa »